Tsy misy amidy toy ny faminaniana. Marina ilay izy. Ny fiangonana na ny iraka dia mety misy teolojia adala, mpitarika hafahafa ary fitsipika tsy misy dikany, fa manana sarintany, scissera ary vondron-gazety vitsivitsy izy ireo, miaraka amin'ny mpitory iray izay afaka maneho ny heviny amin'ny saina tsy miangatra. dia toa handefa vola kely aminy ny olona. Matahotra ny tsy fantatra ny olona ka tsy mahalala ny ho avy akory. Araka izany dia toa misy mpivarotra taloha eny an-dalambe izay tonga ary milaza fa mahalala ny ho avy dia afaka manangona be dia be ny mpanaraka raha mahay ny mandefitra ny soniavan'Andriamanitra izy amin'ny alalàn'ny fitsipiky ny Baiboly toy ny mpanakanto mihetsika ,
Ny zavatra iray tokony hazavaintsika anefa, raha tiantsika ny tsy ho voafandriky ny mpaminany manitikitika, dia izao: Tsy momba ny hoavy ny faminanian’ny Baiboly. Momba ny fahafantarana an’i Jesosy Kristy izany. Raha te hanana toe-javatra tsara ho an'ny fiankinan-doha amin'ny faminaniana ianao, dia atodiho amin'ny irak'Andriamanitra voatendry ho an'ny tenany ihany ny sainao mba hahafahanao mameno izany amin'ny famoronana momba ny hoe iza marina no "Mpanjakan'ny atsimo" na "Mpanjakan'ny ny "Avaratra ", na" ny bibidia "na ny" mpaminany sandoka "na ny tandroka" fahafolo "dia. Tena hahafinaritra, tena mampientanentana, ary saika mahasoa ara-panahy toy ny filalaovana Dungeons sy Dragons mandritra ny androm-piainanao. Na azonao atao ny mandray lesona avy amin’ny apostoly Petera. Nanana hevitra momba ny faminaniana izy - ny niaviany, ny hasarobidiny ary ny tanjony. Fantany ny momba izany. Ary nomeny anay izany fampahalalana izany 1. Hoy ihany i Petera.
“Ny mpaminany izay naminany ny amin’ny fahasoavana voatokana ho anareo, dia nitady sy nitady izany fahasambarana izany, ary nandinika izay andro inona ary ny amin’ny andro inona no nasehon’ny Fanahin’i Kristy, Izay tao anatiny, ary nanambara ny amin’ny fijaliana fahiny, fa ho amin’ny fahoriana. tongava amin’i Kristy sy ny voninahitra avy eo. Efa nambara taminy fa tokony hanompo anareo izy, fa tsy ny tenany, araka izay notorina taminareo ankehitriny tamin’ny alalan’ireo izay nitory ny filazantsara taminareo tamin’ny alalan’ny Fanahy Masina nirahina avy tany an-danitra. »1. Petrus 1,10- iray).
Ity ny "fampahalalana anatiny" ho anay, avy hatrany amin'ny vavan'i Peter:
Ny Fanahin’i Kristy, ny Fanahy Masina, no loharanon’ny faminaniana (Apokalypsy 19,10 hoy ihany koa).
Ny tanjon'ny faminaniana dia ny mialoha ny hahafatesan'ny maty sy ny nitsanganan'i Jesosy Kristy.
Rehefa nahare ny filazantsara ianao dia efa naheno ny zava-drehetra izay hahafantarana momba ny faminaniana.
Ary inona no nandrasan’i Petera tamin’ireo mpamaky azy izay nahazo izany fanazavana izany? Izao tsotra izao: “Koa sikino ny sainareo, mahonona tena, ka antenao ny fahasoavana izay atolotra anareo amin’ny fanambarana an’i Jesosy Kristy” (and. 13). Ny mampifantoka ny saintsika amin’ny fahasoavana dia midika hoe “ateraka indray” (and. 3) amin’ny finoana, ary “mifankatiava mandrakariva amin’ny fo madio” (and. 22). Andraso kely hoy ianao. Ahoana ny amin’ny bokin’ny Apokalypsy? Ny Apokalypsy dia manambara ny hoavy, sa tsy izany?
No. Tsy araka ny fomba fisainan'ny mpifaninana araka ny faminaniana. Ny sarin'ny fanambarana momba ny ho avy dia tsotra, fa hiverina i Jesosy indray andro, ary izay rehetra mandray azy amim-pifaliana dia handray anjara amin'ny fanjakany, ary izay manohitra azy dia hijoro foana. Ny hafatry ny Bokin'ny Apokalypsy dia antso tsy hitsahatra amin'ny fanompoana ny Tompontsika, na dia novonoina ho faty aza isika, satria azo antoka amin'ny tanany feno fitiavana isika - na manao ahoana na manao ahoana na manao ahoana na oviana na oviana ny filaharana amin'ny rafitra ratsy sy ny governemanta ary ny olona te-hanao aminao.
Ny faminanian’ny Baiboly, anisan’izany ny bokin’ny Apokalypsy, dia momba an’i Jesosy Kristy — hoe iza izy, inona no nataony, ary ny hoe hiverina izy. Eo amin’ny fahazavan’io fahamarinana io—ny fahamarinan’ny filazantsara—dia ahitana antso ho an’ny “fandehana masina sy ny toe-panahy araka an’Andriamanitra eo am-piandrasana ny fiavian’ny andron’Andriamanitra” ny faminaniana (2. Petrus 3,12). Ny fandisoana ny faminanian’ny Baiboly dia mampivily ny saina hiala amin’ny tena hafany, dia ny “fahatsorana sy fahadiovana ao amin’i Kristy” (2. Korintiana 11,3) lavitra. Ny fiankinan-doha amin'ny faminaniana dia mivarotra tsara, fa ny fanafody dia maimaim-poana - fatra tsara amin'ny filazantsara tsy misy loko.